NAB: Iyo Yakatanga Sei ... - 2019 NAB Ratidza Nhau ne Broadcast Beat. Mutasviki wezveNhepfenyuro weNAB Ratidza, Mugadziri weNAB Ratidza LIVE
musha » 2017 NAB Ratidza » NAB: Iyo Yakave Yakatanga Sei ...
Zvakanaka, pano tiri, tichiswedera NAB Ratidza! Zvakare, ndichave ndiripo, ndichimiririra Magazini Beat Beat, Sezvo ini ndakapinda muRhow Floor, ndichiona zvandinogona kuona zvezvinhu zvose zvitsva uye zvitsva mu studio (kuparidzira uye pashure pekugadzira) indasitiri.
Kunyangwe nezvose zvinonakidza izvo Zvinoratidzwa, unoshamisika kuti chii "NAB" kana kuti "National Association of Broadcasters"Ndeye? Kunze kwekuva mauto ehurukuro huru yemashandi emakambani pasi pano, NAB ibumbi guru uye rakaoma, rinoumbwa nemasangano ekuparidzira, anosanganisira zvose terevhizheni neredhiyo, uye ikozvino internet uye mamwe marudzi ehuwandu hwekuparidzira, pamwe chete nemamwe ose Mashizha anovatsigira.
NAB yakasiyana-siyana nemazuva ano, nemauto anotambanudza kubva kuchikoro, kutsvakurudza uye nyanzvi yekugadzirwa kwezvinhu (NAB Labs) kune hutungamiri (kana kuti mitemo nemitemo), kubva kuHurongwa Hwekuisa (uye yeTerevhiy Code aka "Chisimbiso Chekuita Zvakanaka") ku The Emergency Broadcast System (EBS), kubva kuIndaneti zviitiko kusvika kumasangano uye misangano uye zvose zviri pakati. Kungopinda mavari Website Kukudzvinyirira nehuwandu hwezvavanobatana uye kuti vanoita zvakawanda sei.
WOW! Ndinoziva, chaiko? Iwe uri mukutya kukuru sezvandiri ini, pese pandinofungisisa kusvika kure kweNAB. Asi zvose zvakatanga sei? Ndezvipi kuzvininipisa kunotanga kweNAB uye vakasvika sei kwavari nhasi? Verenga pamusoro, uye ini ndinotarisira kupindura iyo nemimwe mibvunzo iwe ungave nayo pamusoro pe sangano iri zvakanyanyobatanidzwa pakushambadzira uye kushandiswa kwema studio.
Sangano reNational Association of Broadcasters rinenge rekare sekuparadzira, pacharo. Yakatangwa mu1922 by Eugene F. McDonald, Muvambi we Zenith Corporation, NAB isangano rebhizimisi rega rega rakagadzirirwa chinangwa chekushandira zvidikanwi zvinodiwa zvekushambadzira. Yakanga yakarongeka zvikuru kuisa mazano emitemo mukati mechirongwa chekuparadzira nekugadzira mitemo yekuzvimiririra (pakutanga chaizivikanwa seNational Association of Radio Broadcasters; yakashandura zita rayo kuNational Association of Radio neTerevhizheni Vaparidzi mu1951, apo iyo yakabata Television Broadcasters Association, yakashandura zita rayo kuNational Association of Broadcasters mu1958).
Hurumende yakanga isati iine chero yei "kuzvidzora" uye saka yakapinda muchiito chacho pachayo. The Communications Act ye 1934 vakava mutemo wekutanga wakanyatsogadziriswa kuti utungamirire kukurukurirana (zvose foni uye vasina wire). Kuparidzirwa kwaionekwa sekutengeserana kwekambani, iyo Congress yakanga ine simba rokutonga pasi peSouth Constitution (Article I, Chikamu 8), uye kuparidzirwa kwemashoko kwakagamuchirwa kudzivirirwa kwekutanga. Kuparidzirwa kwakaratidzwa senzira yakasiyana-siyana yekukurukurirana iyo inoda chirongwa chakasiyana chekutonga kupfuura chevatakuri vanowanzofanana nefoni uye telegraphy. Zvose izvi zvakabva zvanyorwa nefilosofi kuti mharidzo yekushambadzira inofanira kushandira rubatsiro rwevanhu vose, nyore, uye zvinodiwa. Basa re 1934 rakasika iyo FCC, Iyo yakatongerwa kuchengetedza kuti vatasviki vemitambo vaite zvinotarisirwa nevanhu, zviri nyore, uye zvinodiwa.
Musi waMay 1, 1955, nhengo dzeNARB dzaisanganisira 1,234 AM (amplitude modulation) zvivako, 327 FM (purogiramu yemagetsi) zvivako uye 3 nhepfenyuro dzenhepfenyuro, Columbia Broadcasting System, Mutual Broadcasting System, uye National Broadcasting Co., Inc. Pamberi peterevhizheni , VaNational Association of Radio neTerevhizheni vatasvi vemaserevhizheni e267 semasangano uye ose maTNT, maTV Broadcasting Co., Columbia Broadcasting System, DuMont Television Network uye National Broadcasting Co., Inc. (Mutsime: Senate Komiti Mhosva, Dare Rinotungamirirwa Nekutsvaga Kurwisa Kwevaduku, Terevhizheni uye Kuyaruka Kwevana, Mushumo wepakati, 1955, Komiti Yenyaya.)
Mushure mokuumbwa kwayo, National Association of Broadcasters yakatanga Radiyo Code muna 1929 uye zvakare, sezvo teknolojia yakatsvaga, Terevhizheni Code mu 1952 (mubhuku rake, Leo Bogart yakataura kuti kuparadzirwa kweTerevhizheni kwakakurumidza kugadzirirwa pasi pemakore makuru eredhiyo akaisa mari Mamiriyoni emadhora mu ... [iyo] bhizinesi (Bogart, Nguva yeTerevhizheni, P. 9, 1956)).
Zvisinei, zvose zviri zviviri zvakagumiswa muC1982 inotevera saritrust yakatangwa neDhipatimendi reRuramisiro yakagadzirirwa kutarisana nehuwandu hwekutengeserana, kuronga kuputsa kweSherman Antitrust Act (15 USC § 1 (1976)). Makambani okushambadzira haana kumanikidzirwa kuva veNAB kana kutevera mazano awakagadza, pasinei nekuonekwa kwe "mitemo yezvakanaka" neC FCC, iyo isinawo kutonga mitemo yevanhu munzvimbo dzakachengetedzwa nemitemo.
NAB "inoenda kuhondo" yevanhu vose, vachiedza chaizvo kuchengeta mitambo yekushambadzira uye kuchengeta zvinhu zvose kuparadzira pane imwe nguva. Kwemakore aya, NAB yakabatanidzwa mumitemo yakawanda, kazhinji ichionekwa seamicus curiae, kana "shamwari yedare" seine chido chakasimba kana maonero pamusoro pechinhu chechiito, asi kwete chikamu chepamutemo chechiito . Maonero avo akabatsira kuumba nzvimbo yepamutemo maererano nehuwandu hwose (iyo inosanganisira kuparadzirwa, mushure mekugadzirwa Multimedia Uye terevhizheni hardware, software, uye mabasa).
Kunze kwokunyengedza uye kuunza zviito zvepamutemo, NAB inopa nhengo dzayo nezvimwe zvikomborero, kusanganisira bhuku rekutsvakurudza riri rine mamiriyoni gumi emabhuku, mushandi anosanganisira nyanzvi mune sayenzi uye teknolojia nekutsvakurudza uye kuronga, uye nhepfenyuro yemwedzi kune avo nhengo (NAB World), Pamwe chete nemabhuku evhiki nevhiki RadioWeek uye TV nhasi.
Mukuwedzera, NAB yakatanga NAB Education Foundation, kuitira kuti idzidzise vagari vomuUnited States pamusoro pemitemo yekutaura kusununguka uye dzimwe nheyo dzine chokuita nemhizha. Nheyo dzinoita tsvakurudzo nemabasa ekudzidzisa pane nyaya dzakadai sekutanga kushandura kodzero dzine chokuita nehuwandu hwepurogiramu, zvinyorwa zvemasangano, uye kutaura kwekutengeserana. Uye ngatiregei kukanganwa magungano egore negore ataurwa, anowedzera pamusoro pevashandi ve100,000 uye ariyo anotungamira ruzivo rwekutsvaga, kushungurudza uye teknolojia yekuratidzira muUnited States!
Iwe uchawana mahofisi makuru eNAB (kupi zvimwe?) KuWashington DC, uko inoramba ichitarisa yakarinda nguva dzose pamusoro peairwaves uye inotungamirira kufamba kwekururama mukati mekushambadzira. Kubva munaNovember 1, 2009, mutungamiri uye CEO weNAB ndeye Gordon H. Smith, Aichimbova Sénata yeUnited States kubva kuOregon.
NAB isangano rekuchengetedza vatungamiri vevanoparidzi veAmerica, uye tine nhoroondo yakareba yekufambira mberi kweredhiyo uye terevhizheni muWashington, "?? vakati mutungamiri weNAB neGavhuna mukuru Gordon H. Smith. Basa redu rave riri uye rakasara kuti ribatsire hurumende yekukwanisa kushumira mharaunda yemunharaunda, kusimbisa mabhizinesi avo uye kutora mikana mitsva. Through NAB Ratidza Uye mamwe maitiro, saNAB Labs, tinosimudzira zvishandiso, nekudaro tichikurudzira mune ramangwana rakanaka remhizha.
Tsvaga zvakawanda pamusoro peNAB ​​nekushanyira website yayo: Www.nab.org.
Editor-In-Chief, Muparidzi at Broadcast Beat Magazine, LLC.
Ryan akatanga kushanda mumashambapiti uye kumashure ekugadzirwa kwemashure pazera remakore gumi nevaviri! Akabudisa mapurogiramu ezerevhizheni, akavaka zvivako zvakakura zvekugadzirwa kwemashure, zvakanyorerwa mamwe emabhizimisi anotungamirira mabhuku uye akanga ari injini yekuridzira kwemakore anenge gumi. Ryan akambonyora nezve Broadcast Engineering Magazine, Creative COW uye mapurojekiti ake ave akataridzwa mumabhuku akawanda.
Nzvimbo dzekupedzisira dze Ryan Salazar (ona zvose)
Kudana All NAB Kuratidza Foodies: Las Vegas Restaurants! #NABShow - January 13, 2019
MaSatellites: Izvozvo Zvokudenga Zvisungo - January 4, 2019
2016 NAB Ratidza 2018 NAB Ratidza nhepfenyuro Broadcast Beat Awards Magazini Beat Beat Broadcast Engineer gutsikana Eugene F. MacDonald FCC Gordon Smith Nhoroondo yeNAB Las Vegas NAB NAB 2018 NAB Expo NAB Ratidza NAB Ratidza Las Vegas Nabshow National Association of Broadcasters National Association of Broadcasters Show	2019-01-04
Zvadaro: Universal Electronics Introduces New Cloud-Based Platform to Unify Entertainment Control and Home Automation Experiences